AbaPakethe beFlexible Abavelisi | I-China iFlexible Packaging Factory kunye nabaXhasi
NGOKUPHAKAMILEYO UKUPHAKISWA KUNYE NOKUPRINTELA CO., LTD
Ukuphinda usebenze kwakhona ii-Pouch Patch
Iingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona
Ezinokuphinda zisebenze zenze iipokotshi
Iingxowa ezinokuphinda zenziwe ngokutsha zeGusset
Ukuphinda usebenze kwakhona kwifilimu
IiMeyili ezinokuphinda zisebenze
Ukuphinda kusebenze kwakhona kunye nokuPhindwa okusebenzayo
3 Icala lokutywina kunye nengxowa yokutsala
Icala Gusset & Quad Seal yakutya
Iipokotshi ezimiliselwe / iipokotshi ezimiliselwe ukuphakheja ukutya / iiplastiki ezenziwe ngeplastikhi
Imilo yengxowa inokulungiswa ngokupheleleyo ngokusekwe kwiinkcukacha zakho. Imizekelo ibandakanya:
Ingxowa ebunjiweyo emileyo (i-ergonomic kwaye kulula ukuyibamba)
Isingxobo esenziwe ngeglassglass (ilungele ulwelo)
Iipokotho ezibunjiweyo ezinamacala ajikeleziweyo
Pouches ezineziphatho kunye izibambo ergonomic
Izikhwama ezinokumanziswa ezibunjiweyo ezinezipeki ezakhelweyo (ukususa isidingo sokulunga okanye umququ wokutya imveliso)
Ukusuka kwiimilo ezenziwe ngokwezifiso ukuya kulungelelwaniso olutsha kunye neentsimbi, ukuPakisha kweChangrong kubonelela ngobuchule obufunekayo ekwenzeni iipokotho zabathengi ezizimeleyo.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Ukutya kwabantwana, ukutya okuziinkozo kunye nezithako, iBhaki, ukutya okutyiwa, iisepha kunye neesosi, ikofu kunye neti, iziselo, Ukutya kweentlanzi kunye nolwandle, ukutya okulungiselelwe, irayisi kunye nepasta, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, iziqhamo nemifuno, ukutya kobisi, impilo kunye nobuhle
Buyisela ingxowa / ibhegi yokutya yezilwanyana / Ukulungele ukutya ukupakishwa kokutya
Iipakethi ezibuyiselwayo ziye zasebenza ngakumbi kwaye zanesisombululo sokupakisha kunendlela yesiqhelo. Ukupakisha kweChangrong kubonelela ngeengxowa zokuthintela ukuphakama okuphezulu ezisisisombululo esipakishayo sokutya okucutshungulweyo kunye nokunye okulungele ukutya. Iipakethi zethu zokubuyisa zinika lula ekupakisheni ukutya okusele kuphekiwe kwaye zinegalelo kwimeko yokupakisha enobuhlobo.
Ngenxa yokulula kwazo, iipakethi zokubuyisa zithathe indawo yendlela yesiko yeebhanti kunye noyilo lweebhotile.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Ukutya kwabantwana, isuphu kunye neesosi, Ukutya kwentlanzi kunye nolwandle, ukutya okulungeleyo, irayisi kunye nepasta, ukutya okumanzi kwezilwanyana, ukutya kobisi, inyama
Flat ezantsi pouches / Plastic Packaging Ukutya / Zip Tshixa Plastic Packaging Bag
Isingxobo esine-flat-bottom, isingxobo sokuma simahla esinobunzulu obongezelelekileyo kunye namandla emveliso. Iipakethi zebhokisi zibonelela ngenketho enye yebhokisi yokufaka endaweni yeNgxowa + yeBhokisi. Ukubonelela ngamacala amane + eepaneli ezisezantsi zokuprinta uphawu, iibhokisi zebhokisi zinika ukunciphisa iindleko ngokususa isidingo sokupakisha kabini.
Ukupakisha kweChangrong kunika uluhlu lweepakethi zesitokhwe ezicacileyo, ezifumanekayo ukuze zithengwe kwi-Intanethi. Ukupakisha kweChangrong kunokwenza neebhokisi zeebhokisi zesiko ukuhlangabezana neemfuno zakho ezithile.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Ikofu, iimpahla ezomileyo, iisiriyeli, i-confectionery, amajikijolo afriziwe, ukutya kwaselwandle, ityuwa kunye ne-p.
Iipakethi ezi-3 zecala lokutywina kunye neeplastiki zokucoca / iPlastiki yePlastiki / Ingxowa yePlastiki yokutya
Ingxowa etywiniweyo emacaleni amathathu enika isisombululo esilula, esonga iindleko kwimilinganiselo emikhulu okanye emincinci yemveliso. Ezi zikhwama sisisombululo esineendleko ezifanelekileyo, ezilungele ukongeza ubomi beshelfishi uninzi lweemveliso zokutya.
Ukupakisha kweChangrong kubonelela ngohlobo oluninzi lweepakethi zokucoca isitokhwe, ezikhoyo ukuze zithengwe kwi-Intanethi. Ukupakisha kweChangrong nako kunokwakha-iipoksi zokucoca ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Inyama, itshizi, iibhokhwe ezincinci, iintlanzi, iinkukhu, ukutya kwaselwandle, indawo ekubhakwa kuyo kunye nolwelo
Icala gusset kunye neQuad itywina
Ukuma simahla okanye ipakethi ethe tyaba. I-gusset idala ubunzulu obongezelelweyo kunye namandla emveliso. Ipakethi inokwenza ibhloko esezantsi. Amacala amane abonelela ngemveliso eyomeleleyo yokufaka uphawu.
Ukupakisha kweChangrong kunika uluhlu lweebhegi zekofu zesitokhwe ezifumanekayo zokuthengwa kwi-Intanethi. Changrong Packaging nako siko-ukwakha icala gusset / quad itywina itywina ukuhlangabezana neemfuno zakho ezithile.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Ikofu, i-cook-in-tray roast, iimpahla ezomileyo, umgubo, i-confectionery, iti
Ingxowa ekhutshiwe / isosi kunye nokupakisha isepha / iipokotho zoTywala
Ukupakishwa okuma simahla kulwelo, iisosi, iipasta kunye neepowder ezilungele ukudityaniswa. Ukukhutshelwa ukuthulula, le phakheji inikezela ngeendlela 'zokungabinangxaki' kunye 'nokutya ekuhambeni'. Ilungele ukubonisa imveliso kwishelufa.
Ukupakisha kweChangrong kunezinto zesitokhwe ezikhoyo zokuthengwa kwi-Intanethi. Ukupakisha kweChangrong nako kunokwakha-iipokotshi ezinesuti ukuhlangabezana neemfuno zakho ezithile.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Iziqhamo ezisulungekileyo, isitokhwe, iisosi, iipasta, iipowder ezilungele ukudityaniswa, iisepha
Yima up ingxowa / Zip Lock Plastic Bag / Yima Up yakutya Nge uziphu
Ukupakishwa okuma simahla kulwelo kunye neempahla ezomisiweyo. Rhoqo ngefestile ecacileyo yokujonga imveliso, ezi ngxowa zibonelela ngamandla kwithala levenkile ngelixa libonelela ngokusebenza kwendawo yokubeka ingqokelela.
Ukupakisha kweChangrong kubonelela ngoluhlu lwesitokhwe seepakethe ezicacileyo kunye nesilivere ngasemva / ecacileyo ngaphambili efumanekayo yokuthenga kwi-Intanethi. Ngeempawu ezongezelelekileyo ezinje ngokuxhathisa okuphezulu kunye neebhegi ezinokuhanjiswa, UkuPakisha kweChangrong kunokwakha isiko ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo: Iisuphu, iisosi, izidlo esele zilungile, iisiriyeli, amandongomane, iminquma
INDLELA YASERONGLI WEST, QINGZHOUCITY, SHANDONG CHINA